FITAIZANA ALIKA KELY: MIA THE AMERICAN BULLY 7 HERINANDRO - ALIKA
Fitaizana alika kely: Mia the American Bully 7 herinandro
Andro iray amin'ny fiainana miaraka amin'ny alika kely Mia the American Bully (Bully Pit). Herinandro voalohany an'i Mia — 7 herinandro, 9 kilao, 9 1/4 santimetatra avy amin'ny tany ka hatrany amin'ny tendrony avo indrindra amin'ny soroka (malazo).
alika kely bern bern
Mampahafantatra ny Vata
Tena nitandrina aho rehefa fampahafantarana azy amin'ny vata . Nampiasa a tehina mpampijaly ary taty aoriana dia mitsabo alika sasany mba hampisehoana azy fa toerana sambatra izy io. Isaky ny nametrahako azy dia tsy narindriko ny varavarana raha tsy efa nilamina izy.
Matory ny alina voalohany
Ny alina voalohany dia napetrako teo am-pandriana alika ny vata fatin'i Mia, nieritreritra aho fa te hatory eo akaikin'i Bruno sy i Spencer. Ny ampitso maraina dia tsikaritro fa nibolisatra kely i Spencer teo am-pivezivezy teny. Tsapako tamin'ny nametrako an'i Mia teo am-pandriana taorian'ny nidirany tao an-trano manao toy ny mpitarika, dia noraisin'i Spencer izany rehefa nitaky ny fandriana izy ary tsy fantany izay hatoriana hafa.
Satria i Alpha dia teraka alpha voajanahary ary tsapan'i Spencer ny heriny matoky tena sy manam-pahefana, dia nanapa-kevitra ny hamindra ny vatam-paty Mia izay ahitany ny fandriana aho, saingy tsy eo an-tampon'izy ireo izy. Taorian'ny namindrako ilay vata, dia toa faly i Spencer. Nanomboka fotoam-pilalaovana niaraka taminy izy ary natory am-pifaliana teo anilany taty aoriana ny andro.
Alina voalohany an-trano
Ny harivariva no nitondran'ilay mpiompy an'i Mia mba hijerenay azy. Tamin'ny fotoana nanorenan'ny tsirairay ny alina dia tokony tamin'ny 1:00 maraina.
Tamin'ny 1:45 maraina dia henoko nitomany i Mia ka nitsangana aho dia nitondra azy nivoaka hihi, izay nataony avy hatrany.
Mampalahelo fa mifoha amin'ny 5:30 maraina daholo ny olona ao an-trano mba hiasa sy hianatra. Matetika aho matory aorian'ny misasakalina ary mifoha amin'ny 8 ora maraina mazava ho azy fa nifoha i Mia rehefa nifoha ny olon-drehetra. Naheno azy aho ary nidina tany ambany mba hamela azy hivoaka hanao ny raharaha maraina. Hita fa efa nentin'i Amie hihaona sy hody izy, ary nandefa onja izy rehefa naverin'i Amie tao anaty vata misy azy. Afaka niverina natory aho, saingy efa nifoha aho ary tsara tarehy loatra izy ka tsy nipetraka teo ary nijery rehefa nitsambikina nanodidina ny trano nilalao kilalao alika izy.
Tamin'ny 7:00 maraina dia niverina natory i Mia. Vao avy namoaka azy hihaona aho ary napetrako tamin'ny tany izy avy eo niforitra teo am-pandriana alika. Rehefa afaka kelikely, naveriko tao anaty vata misy azy izy satria tsy hijanona hijery azy aho. Amin'ity taona ity dia mila fanaraha-maso 100% ny alika kely. Natory i Mia ary nakimpiny ny masony. Niandry aho mandra-pahafatiny talohan'ny nanidiana ny varavarana vata. Aza manidy varavarana vata mihintsy amin'ny alika tsy milamina na hataonao mahatsapa ho voafandrika ilay alika fa tsy amin'ny toerana azo antoka. Rehefa henon'i Mia nandehandeha aho dia nivaly. 'Shhhh!' Izay ihany no nalain'i Mia natory.
Ny ampitso maraina dia samy nijery an'i Mia izahay sy i Sara rehefa nihazakazaka izy. Tsy tokony ho tsikaritsika fa maimbo tamin'ny tany izy satria nibolisatra sy nitsaoka. Nosamboriko izy ary naka azy. 'Ie, tsia!' Namoaka fihetsiketsehana fanoherana kely i Mia rehefa naka azy aho. Ie, ity alpha kely ity dia tsy maintsy hidina hiala ny mpandeha an-tany.
Taty aoriana tamin'ny andro dia nanao izany teo imasoko indray i Mia. Nihazakazaka izy. Hoy aho hoe 'Tsia!' ary naka azy ary nitondra azy tany ivelany fa tamin'ity indray mitoraka ity dia tsy nanao fihetsiketsehana izy. Mila mijery akaiky an'ity zazavavy kely ity aho. Toa tsy harafesina aho any amin'ny departemanta puppy. Amin'ity taona ity dia misy ny lozam-pifamoivoizana ateraky ny alika ao anaty trano noho ny hadisoan'ny olombelona. Tsy misy olona tonga lafatra, ao anatin'izany aho. Fotoana tokony hijerena akaiky kokoa.
Ny fanambadiana an-trano dia ho sarotra mandra-panafana ny andro. Rivotra be izao ny maripana miaraka amin'ny mari-pana 8 degre sy ny hatsiaka -12 ° F ary tsy dia tian'ny Mia izany. Raha vantany vao mivoaka ivelan'ny trano izy dia manomboka misento. Nataoko ao anaty palitao izy, napetrako izy hanao ny azy ary averiko ao anaty palitao raha vantany vao mandeha izy. Ny valiny noho ny fanamaivanana ny tenany tany ivelany dia ny fahafahany miverina ao an-trano. Nandeha avy hatrany izy, na ny pee na ny vovoka. Rehefa tsy mila mandeha ratsy izy dia mihazakazaka eo anelanelan'ny tongotro ka miverina miadana aho, manandrana mampody azy. Indraindray izy dia nipetraka fotsiny ary nanomboka nitomany. Mangatsiaka loatra ka tsy voatery nandeha izy. Nentiko tany anaty palitao aho ary naveriko niditra. Safidy foana anefa ny padee, matetika izy ireo no manakorontana ny alika. Raha afaka manalavitra azy aho dia tsy te-hihemotra ao amin'ny vaky trano sampana amin'ny fampianarana azy fa indraindray tsy maninona ny manala tena ao an-trano. Tsy tiako koa i Bruno sy Spencer hahita alika hafa avela hanafaka ny tenany ao anatiny. Ny trano no lavaka ary ny lavaka dia heverina fa hadio hatrany.
Mila mampianatra an'i Mia handeha eo am-baravarana aho rehefa tsy maintsy mivoaka any ivelany izy, na izany aza, amin'izao fotoana izao noho ny hafanana mangatsiaka dia ratsy be ny any ivelany. Tsy mbola nanandrana nampianatra azy handeha teo am-baravarana aho. Rahampitso dia tokony hahatratra 29 ° F ny maripana ary tokony ho faty ny rivotra. Ho zaka kokoa ny any ivelany, mety ho azoko aseho azy fa mahafinaritra mandritra ny fotoana fohy. Amin'izay fotoana izay dia hanomboka hampianatra azy handeha amin'ny varavarana aho.
Nandeha tsara dia nandeha ny andro sisa. Nahita an'izany i Mia raha nibolisatra sy / na nibolisatra tany ivelany izy dia niditra tao anaty palitao ary nentina tamina toerana mafana.
Andro faharoa mamaky trano
Tamin'ny 1 35 maraina dia nitomany tao anaty vatany i Mia. Nidina tany ambany aho mba hamoaka azy. Nihodinkodina eraky ny varavarana izy ary niondrika avy hatrany rehefa tonga teo amin'ny ahitra. Avy eo dia nihazakazaka nankeo amiko izy, nipetraka ary nikiakiaka hatao ao anaty palitao. Tsy tiany ny hatsiaka ary niditra an-tsokosoko tao ambanin'ny tendako izy. Izy no alika mahatsikaiky indrindra nananako ary angamba ilay be fitiavana indrindra. Ny mari-pana dia tamin'ny isa tokana nandritra ny alina ary nihetsiketsika toy ny ravina avy amin'ny hatsiaka i Mia ka tsy nataoko nandeha an-tongotra niverina tany an-trano izy. Nanafana azy faran'izay haingana aho. Na izany aza, mila manomboka mandeha irery izy. Mila mandanjalanja ny loza ateraky ny hatsiaka aho amin'ny alàlan'ny famelana azy ho alika, ary ny ampahany manan-danja amin'izany dia ny fandehanan'ny irery mandeha irery.
Tamin'ny 3:40 maraina dia nifoha indray i Mia ary nandefa ny vatany. Nentiko nivoaka tany amin'izay nopotsehiny avy hatrany dia niverina niditra izahay. Niverina natory avy hatrany tao anaty vatany izy.
Nifoha tamin'ny 7:00 maraina aho nahita ireo ankizy nikarakara an'i Mia tontolo maraina. Nivoaka izy hanao ny zavatra nataony ary nampatory teo alohan'ny andehanany niasa sy nianatra. Tena mahafinaritra ny manana fianakaviana mahatakatra ny fihetsiky ny alika ary manampy amin'ny fikarakarana.
Andro fahatelo fanesorana trano
Ry Mia, ry aiko, inona no nataonao? Io ve ilay pee hitako? 'Neny a, tadidio io zavatra nolazainao io hoe raha zaza kely mitovy taona amiko no mijery ao an-trano dia tsy izaho no diso? Tadidinao? Manao izany ve ianao? ' Navelan'i Sara hivoaka ny peniny i Mia nefa tsy nampahafantariny ny olona ary variana tamin'ny sakafo hariva izy.
Amin'ny ankapobeny, i Mia dia mahavita be amin'ny famakiana trano. Ny tiako holazaina dia hoe rehefa avoakintsika izy dia mazàna mandeha avy hatrany izy. Fantany izay tianay hataony any ivelany. Ny maripana mangatsiaka dia tsy nanampy na iza na iza satria mora mangatsiaka be izy indraindray ary toa indraindray izy mikiaka ary tsy te-hihantona ela loatra mba hikoropaka. Hitako fa ny fitondrana Bruno sy Spencer any ivelany ho any amintsika dia manampy azy hanadino ny hatsiakany ary mifantoka amin'ny famoahana azy rehetra.
'Hey anaka, mahita an'i Spencer etsy ve ianao? Miaraka izy. Izany no tian'ny olona hataonao. Raha te hiverina haingana ao amin'ny trano mafana ianao fa tsy vita fotsiny. '
Andro fahaefatra fanesorana trano
Avoahinay matetika izy ary azony fa raha mandeha izy, dia miverina ao anatiny. Mangatsiaka any ivelany ary mahira-tsaina izy, ka matetika dia mandeha eo noho eo. Nampiasa sakafo aho hitarihana azy ho eo am-baravarana mba hitondrany azy irery. Aminy dia mangatsiaka be ny any ivelany ary toy izany foana. Ny fidirana amin'ny varavarana dia midika hoe mankany amin'ny toerana mangatsiaka. Ny sakafo dia tokony hanampy azy hahita izany ho zavatra tsara. Raha misy lafy tsara azo atao, dia izay. Rehefa mahazo hafanana kely any ivelany izy dia ho mora kokoa aminy ny mahita azy ho tena izy.
Vao avy nitondra an'i Mia tany amin'ny pee aho, ary nataony izany ary niverina niditra izahay. Nanomboka nanomana ny sakafo maraina ho an'ny alika aho rehefa nahita ny afovoan-tranon'i Mia tao amin'ny efitrano fisakafoana metatra vitsivitsy monja avy teo amin'ilay nijoroako. 'Hey!' Nihazakazaka i Mia rehefa nilatsaka ny farany tamin'ny poop. Nentiko tany ivelany izy fa efa vita. Tokony nijanona ela kokoa tany ivelany aho rehefa namoaka azy tamin'ny voalohany, saingy nisy oram-be nivatravatra ary maika aho. Oad!
Taty aoriana tamin'io andro io ihany dia niverina tany ivelany niaraka tamin'ny oram-be izahay ary niondrika izy ary nihiaka. Matetika tiako ny ririnina, saingy tena sakana izany.
Taty aoriana tamin'io andro io ihany dia nibolisatra teo amin'ilay toerana vao avy nipaoka i Mia. Hmmmm, inona ny fialantsiniko amin'ity indray mitoraka ity? Azo antoka fa afaka mamina zavatra iray aho, sa tsy izany? Nametraka ny fivarotana enta-mavesatra aho ary nisy fipoahana, teo izy ary avy eo lasa. Efa niondrika izy talohan'ny nahitako azy. Ahoana ny momba an'io fialantsiny io: io faritra io ihany no nampihetsiketsika an'i Spencer fony izy mbola kely. Mety ho fofony ve izany? Andraso, miandry. Izaho dia tokony ho mijery azy 100% amin'ny fotoana raha tsy ao anaty vatany izy. Ahoana ny fialan-tsiny fa olombelona fotsiny aho? Hiezaka mafy kokoa aho. Fampanantena.
Andro fahenina mamaky trano
Teo am-pandriany i Mia nilalao sy nifoka taolana tampoka, dia nitsambikina tampoka izy ary nandohalika tamin'ny tany teo alohan'ny fandriana alika. OAY! Tsy nanantena an'io aho. Tsy misy fampitandremana. 'Ie, tsia!' Afaka nisambotra azy aho. Antenaina fa ho tonga ao an-dohan'ilay mpampijaly olona io fa tsy afaka mioty ao an-trano izy. Ankehitriny, taiza no nametrahako ilay horonana lamba famaohana taratasy sy mpanadio?
Ny mpiompy an'i Mia dia nilaza tamiko fa alika alika ao amin'ny fako izy ary marina ny azy. Ny fotoana voalohany nahitako azy dia tamin'ny fihaonany voalohany tamin'i Bruno sy Spencer. Noraisiko izy rehefa nibolisatra naneho an'i Bruno sy i Spencer fa natoky tena izy. Rehefa nanao an'io aho dia nimonomonona ary toa nitodika tany amin'ireo alika io ary nitodika tany amin'ilay olona nanelingelina azy, dia izaho izany. Taty aoriana, rehefa lasa ny mpiompy, indroa izy dia namoaka fimenomenomana kely rehefa tsy te hanao zavatra. Ohatra, indray mandeha aho no naka azy avy teo am-pandriana alika mba hametraka azy ao anaty vatony ary nanao feo fanoherana kely izy izay toa feom-bolo afangaro amin'ny lapoaly. Fotoana iray hafa dia rehefa tratrako nihomehy tao an-trano izy ary naka azy nilaza hoe: 'Ie, tsia.' Ilay izy nilaza hoe: 'Hey, tsy tiako izany ary tsy tiako hataonao izany!' Ao amin'ny tontolon'ny alika dia mahazatra ny milaza amin'ny hafa ao anaty fonosana ny zavatra tadiaviny sy tsy tadiaviny ny mpitondra. Ny zavatra hianarin'i Mia kely anefa dia tsy izy no mpitarika ato amin'ity fonosana ity. Ny olombelona dia. Hampianarintsika azy izany amin'ny alàlan'ny fiasa tahaka ny mpitarika amin'ny fiainantsika andavanandro. Toy ny alika hafa ao anaty fonosana, tsy avela hiditra amin'ny fanaka izy, na amin'ny efitranon'ny mpianakavy, na any ambony rihana amin'ny efitrano fandriana. Tsy hisy vavahady fa ho fari-tany tsy maintsy hajany irery. Ampianarinay azy ihany koa fa ny fihodinana any an-damosiny sy ny famoahana ny vavony dia mitondra valisoa amin'ny alàlan'ny fanodinana azy imbetsaka isan'andro mba hikosehana ny kibony mandra-pialany sasatra. Hampianarina azy koa ny 'fika maty alika' toa an'i Bruno sy Spencer, izay lazainay hoe 'alika maty!' ary mandry eo anilany ny alika ary mbola mandeha mitsabo tsara. Izy io dia toerana manoa izay omena valisoa amin'ny sakafo. Mila mitazona ny tongony eo amin'ny tany ihany koa izy, tonga rehefa antsoina, voditongotra amin'ny fehikibo, mivoaka ny varavarana aorian'ny olona sns dia tafiditra tsara i Mia. Mila mianatra ny fitsipika fotsiny izy ary betsaka ity trano ity . Mandritra izany fotoana izany dia milamina ny olombelona, ​​tsy miady na mivazavaza isika ary tsy misy miresaka tsy manaja olona na iza na iza ka tsy hahatsapa fihenjanana ao an-trano izy. Ny angovo toa izany dia avy amin'ny olombelona dia fahalemen'ny biby amboadia. Raha manana an'io karazana fihenjanana avy amin'ny olombelona io ny trano dia saika tsy azo atao ny mamorona mandanjalanja ho an'ny canine.
Uhhhhh, fikosohan-kibo ...
Mamela ny olona hikasika ny sakafony i Mia rehefa mihinana izy. Notsapaiko indray mandeha ary toy izany koa ny ankizy. Izy io dia zavatra tsara atao indray mandeha, fa TSY zavatra tianao hatao imbetsaka isaky ny misakafo foana. Tsy te-hihinana sakafo alika tsy tapaka ianao rehefa misakafo. Ny fanaovana izany dia hampianatra ny alika fa tsy maintsy mihinana haingana sy / na tsy maintsy miaro ny sakafony izy. Ilaina ny sakafo mba ho velona ka raha tsara ny maka antoka ny alika dia mamela anao hikasika ny sakafony ary zatra manana olona afaka manala azy io, dia tsy te-hanenjika alika ianao amin'ny fitsapana azy io hatrany ary tapitra. Misy tsipika tsara eo amin'ny fahaiza-mandanjalanja momba izany sy ny fanorisorenana hatramin'ny farany hamoronana olana.
Voalaza fa ny olombelona dia tokony ho afaka maka zavatra amin'ny alika foana, na sakafo, taolana, kilalao na zavatra hafa. Tsy azo antoka ny miaina miaraka amin'ny alika miambina. Raha miambina na inona na inona mihitsy ny alika dia fotoana tokony hiverenan'ny olombelona hijery ny sary lehibe amin'ny fomba IZY IREO tsy maintsy miova mba hanovana ny alika . Ny toetran'ny alika dia taratra mivantana hatrany amin'ny fonosana manodidina azy. Rehefa miaina miaraka amin'ny alika ny olona dia fonosan'ny alika.
ohatrinona ny lanjan'ireo spaniels akoho
Nahamarika zavatra hitako nahaliana. Rehefa nanitsy an'i Mia aho noho ny zavatra toy ny fitsakoana zavatra tsy voafetra, ny fitsirihana ao anaty trano, ny fitsambikinana olona na ny fanaikitry ny alika kely, dia nijery akaiky i Bruno sy i Spencer. Azoko lazaina fa takatr'izy ireo fa mila mianatra ny zavatra antenaina ilay alika kely ary afaka miteny izy ireo fa te hampianatra azy aho. Nijery ahy i Bruno rehefa ho tonga haka azy i Mia rehefa nandry izy. Hoy ny masony, 'Betsaka ny asa tokony hataontsika amin'ity zipo kely ity.' Toa hendry izy raha nifandray tamiko rehefa nandefitra ny fihetsik'izy ireo.
Ny ampitson'ny nandraisanay an'i Mia dia tsikaritro fa toa tsy nisy intsony ny fihetsika kely nananany tamin'ny andro voalohany nihaonako taminy. Tsy hitako na tsapako fa efa eo io. Ny vinavinako dia ny nahalalany ny filan'ilay entana. Hilaza ny fotoana raha mivoaka indray izy io, fa raha tsy miovaova dia afaka mitazona azy toy izany isika.
sary an'ny alika chow chow
fifangaroana kely schnauzer shih tzu mifangaro
mifangaro omby alika omby omby
Sarin'alika alika kely 6 herinandro
Mpiandry alemanina 4 taona
mifangaro mainty sy fotsy labrador retriever mifangaro
Ahoana no ataovy lehibe turkeys Get